Xaq miyaan u leeyahay inaan cunaqabateeyo shaqaale u shaqeeya tartame inta lagu jiro fasaxa jirada?
Posted by Tranquillus | Déc 31, 2020 | Shabakada
Fasaxa jirada: hakinta heshiiska shaqada
Fasaxa jirada ayaa hakinaya heshiiska shaqada. Shaqaaluhu mar dambe ma siinayo shaqadiisa. Haddii uu buuxiyo shuruudaha xaq u yeelashada, sanduuqa aasaasiga ah ee caymiska ayaa bixiya macaashka amniga bulshada ee maalinlaha ah (IJSS). Waxaa sidoo kale lagaa rabi karaa inaad siiso isaga mushahar dheeri ah:
ha ahaato adeegsiga Xeerka Shaqaalaha (art. L. 1226-1); ama iyada oo la adeegsanayo heshiiskaaga wadajirka ah.
Maqnaanshaha jirada awgeed ayaa cawaaqib ku yeelan doonta aasaaska warqadda mushaarka, gaar ahaan haddii aad ku tababbarto dayactirka mushaharka iyo in kale.
Xitaa haddii heshiiska shaqada ee shaqaalaha fasaxa jirada la joojiyo, kan dambe waa inuu u hoggaansamo waajibaadka ku xiran qandaraaskiisa shaqo. Isaga, tan macnaheedu waa ixtiraamka waajibaadka daacadnimada.
Fasaxa jirada iyo ixtiraamka waajibaadka daacadnimada
Shaqaalaha fasaxa ku jira waa inuusan waxyeellayn loo-shaqeeyaha. Marka, haddii shaqaaluhu uu ku guuldareysto inuu guto waajibaadka ka imanaya waxqabadka aaminka wanaagsan ee qandaraaskiisa shaqada, waxaad u badan tahay inaad…
Xaq miyaan u leeyahay inaan cunaqabateeyo shaqaale u shaqeeya tartame inta lagu jiro fasaxa jirada? July 10th, 2021Tranquillus
READ Helitaanka FUN
horeExcel bilaash ah: sida loo abuuro unug cusub?
socdaBaro SEO: dhammaan waxyaabaha lagama maarmaanka u ah bilaabista!
Aftahannimada dadka oo dhan: erayada ku hadasha, turuqa-yaqaanka iyo daaweeyayaasha hadalka
Cilmi-baaris dib loo soo saari karo: mabaadi'da hab-raac ee sayniska hufan
Saamaynta deegaanka ee tignoolajiyada dhijitaalka ah
Kor u qaadista wacyiga dhalinyarada ee khataraha shaqada